Runtastic Road Bike Pro yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Runtastic Road Bike Pro yemahara kwenguva yakati rebei
Mabhasikoro ndee chirimo ndiro zita remufirimu iro vazhinji vedu tinobvumirana naro. Tese isu tine bhasikoro, kunyanya patinoshandura kero yedu kuti tishandise mwaka wezhizha, chinhu chekutanga chatinowanzo tsvaga uye Tuning ndiyo yedu inodikanwa bhasikoro mumazuva ekutanga kutora mukana wezhizha.
Parizvino muApp Store tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa ine chekuita nemitambo muuzhinji. Asi zvakare nebhasikoro kunyanya. Runtastic Road Bike Pro ndeimwe yacho. Kunyangwe ichigadziriswa nenyanzvi mukumhanyisa macircuit, haina kungoitirwa vashandisi vepamutambo uyu chete, asi chero mushandisi anogona kuushandisa pavanopinda parwendo kuti vaongorore zvakatenderedza, tora nzira yavave kutaurwa nezvazvo kana kungoenda kunofamba famba uchitikomberedza.
Kana tisina odometer pabhasikoro, chishandiso ichi chakanakira, kubvira pamusoro pekutiratidza zvese ruzivo zvine chekuita nerwendo rwedu, inoratidza isu kurerekera kwatinokwira, kuedza kwakaitwa, macalorie akarasika, nguva yakashandiswa, daro rakafamba….
Runtastic Road Bike Pro Main Zvimiro
Rekota bhasikoro rako rinokwira kuburikidza neGPS: kureba, kureba, kumhanyisa, kukwira kuwana, kumhanya, macalorie akatsva, nezvimwe.
LIVE Tracking uye Motivations: ratidza shamwari dzako kwaurikuita pedaling uye nekukurumidza kwauri kuenda. Uye zvakare, shamwari dzako dzinogona kukutumira zvinorarama zvinokurudzira
Mudzidzisi wezwi: inokuudza yako kumhanya, kureba, kukwira kuwana, nezvimwe.
Nzira yekutsvaga - Bhurawuza uye tsvaga zviuru zvemigwagwa yebhasikoro (inowanikwa muapp uye paRuntastic.com)
Tsanangudzo yemugwagwa wako wekuchovha bhasikoro unosanganisira kukwidziridzwa
Kubatanidzwa kweOver Street Mepu uye Vhura Cycle Mepu uye nemepu dzisiri pamhepo dziripo: dhawunirodha uye chengetedza mamapu ako pane yako iPhone kuti uashandise iwe kana uchifamba kana usina internet yekubatana.
Ruvara matanho (kumhanya, kukwirira, kukwira chiyero, kurova kwemoyo, nezvimwewo)
Inotaridza chiyero chazvino chekukwira panguva yekufamba kwako (kukwira kuwana / miniti)
Inoratidza giredhi razvino mu%
Auto-pause - hapana chikonzero chekumira kana kutanga zviitwa nemaoko panguva pfupi pfupi (ine Runtastic's kumhanya uye cadence sensor)
Mamiriro ekunze nemhepo mamiriro
Ongororo yakadzama yebhasikoro rako incl. wakareba zvakadii wakakwira kana kudzika mutserendende uye wakareba sei mugwagwa
Kuyera kwekadhi (ine Runtastic kumhanya uye cadence sensor)
Kuyera kwemoyo kuyera (iine yakawedzera Hardware)
Gadzira yako skrini: sarudza iwo maitiro (kureba, kumhanyisa, kukwira kuwana, macalorie akatsva, nezvimwewo) zvaunoda kuona panguva yako yekukwira
Mimhanzi: gadzira runyorwa rwekubuda kwako uye shandisa Powersong yako kuti uwedzere kukurudzira kwako
Sevha zviitiko zvako zvebhasikoro paRuntastic.com
Goverana zviitiko zvako zvebhasikoro paFacebook, Twitter uye neemail
Runtastic zhizha rega rega, kazhinji inopa maapplication emahara kwenguva pfupi, kune avo vese vashandisi vasina kuyedza vane mukana vasina kushandisa euro. Mutengo wakajairika weichi chishandiso ndeye 4,99 euros, asi ikozvino, tinogona kurodhaunura mahara kwenguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Runtastic Road Bike Pro yemahara kwenguva yakati rebei
Jairo celis akadaro
Haisi yemahara, yakakosha 4.99
Pindura Jairo Celis
Sezviri pachena kukwidziridzwa kwapera.
Apple Inopemberera Pride Parade neRainbow Apple Watch Tambo dzeVashandi
iOS 10 beta 1 vs iOS 9.3.2 kumhanya bvunzo